दशैको लागि नयाँ नोट साट्ने आजदेखि,राष्ट्र बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता हट्यो,कहाँ-कहाँवाट पाईन्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दशैको लागि नयाँ नोट साट्ने आजदेखि,राष्ट्र बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता हट्यो,कहाँ-कहाँवाट पाईन्छ ?
काठमाडौं । चाडपर्वलाई लक्षित गरी नयाँ नोट साट्ने काम आज (शुक्रबार)बाट सुरू भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई लक्षित गरी नयाँ नोट सटही सुरु गरेको हो। राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था गरेको हो। शुक्रबारदेखि सुरु भएको नयाँ नोट उपलब्ध गराउने कार्यक्रम १७ गतेसम्म जारी रहने राष्ट्र बैंक जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सूचना नै जारी गरेर सर्वसाधारणले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नोट प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म नयाँ नोट लिन सक्ने जानाकारी गराएको हो।
सअघिका वर्षमा जस्तो ठूलो चाड दशैँका लागि नयाँ नोट साट्न यसपटक राष्ट्र बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखाबाटै नयाँ नोट साट्न सकिनेछ। उपत्यकाभित्र सर्वसाधारणले नेपाल बैंकबाट न्युरोड, कीर्तिपुर, महाराजगञ्ज, जोरपाटी, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, लाजिम्पाट र भक्तपुर शाखाबाट नयाँ नोट लिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सिंहदरबार प्लाजा, सिंहदरबारपरिसर, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमि, विशालबजार, नक्साल, बालाजु, लुभु र टोखा शाखाबाट नयाँ नोट साट्न पाइनेछ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकबाट गौशाला, गठ्ठाघर, रामशाहपथ, रत्नपार्क, थानकोट र पुल्चोक शाखाबाट सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाएको छ।
त्यस्तै उपत्यकाबाहिरका सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटार र विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी कार्यालयबाट नयाँ नोट पाउनेछन्। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडका राष्ट्र बैंकको नोटकोष रहेका सबै शाखा कार्यालयहरुबााट समेत सुकिलो तथा सीमित मात्रामा नयाँ नोटहरु सटही गर्ने व्यवस्था मिलाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
नयाँ नोट आगामी १० गतेदेखि १७ गतेसम्म वितरण गरिनेछ। सर्वसाधारणले पाँच रुपैयाँ, १० रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ र १०० रुपैयाँ दरका नयाँ नोट एक/एक प्याकेट गरे प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले सटही सुविधा उपलब्ध हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बडा दशैँमा साना दरका नयाँ तथा सुकिलो नोटको माग उच्च भएकाले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न स्थानबाट नयाँ नोट साट्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। उपत्यका बाहिर विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यालयबाट नयाँ नोट साट्न सकिने छ।
साउने सङ्क्रान्तिः लुतो फालौँ
साउन ३१। काठमाडौँ, लुतो फाल्ने पर्व साउने सङ्क्रान्ति शुक्रबार मनाइँदैछ । सौर्यमान्अनुसार सूर्य […]
रियो ओलम्पिकमा २६ स्वर्णसहित अमेरिका शीर्ष स्थानमा
एजेन्सी, रियो दि जेनेरियो । ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोमा जारी विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ३१ औं […]
काठमाडौं । नेपाल र मौरिसस सरकारबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको […]
बालुवाटार जग्गा घोटालाका सूत्रधार विदेश भागे, विदेशबाटै शक्तिकेन्द्रसँग संवाद
काठमाडौं । व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन […]
महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक: नेता नेपाल
साउन ९ । काठमाडौं, एमाले नेता माधवकुमार नेपालले महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक मान्न कार्यकर्ताहरुलाई […]
इजरायलले नेपाललाई कृषि आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने
पुस २५ । काठमाडौं,इजरायलले कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने आफ्नो देशको आधुनिक प्रविधि नेपाललाई पनि हस्तान्तरण गर्ने […]